गर्भावस्थामा शारीरिक सम्बन्ध हानिकारक
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ता स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीगर्भावस्थामा शारीरिक सम्बन्ध हानिकारक
डा. जीवन धमला
पछिल्लो समय प्रसूतीको चरणमा पुगेपछि विभिन्न किसिमको जटिलताले गर्दा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेको घटना धेरै सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । विदेशको तुलनामा नेपालमा प्रसूतिका समस्याहरू धेरै देखा पर्छन् । सबैको हकमा गर्भावस्था सामान्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । कतिलाई गर्भावस्थाका बेला जटिल समस्या आइपर्ने गर्छ ।
नेपालीमा मातृमृत्युदर बढ्नुमा पनि गर्भावस्थामा हुने जटिलता नै मुख्य कारण हो । यस्ता जटिलता गर्भावस्थामा मात्र नभई सुत्केरी अवस्थामा पनि हुने गर्छ । गर्भावस्था वा सुत्केरी अवस्थामा विभिन्न जटिलताहरु देखा परे महिलाहरूको मृत्युसमेत हुनसक्छ । विराटनगरको कोशी अस्पतालको स्त्री तथा प्रसूति विभागमा कार्यरत डा. जीवन धमलासँगको छोटो कुराकानी…..
प्रसूतिमा हुने सामान्य जाँचबाहेक के कस्ता समस्याहरू छन् ?
प्रसूतिको समयमा सामान्य जाँच बाहेक महिलाहरूमा हुने जटिलताहरूमा बच्चा तथा आमाको स्वास्थ्य, रगतको कमी, उच्च मृत्युदर, हाइपरटेन्सन अर्थात् हाइब्लडप्रेसरको समस्याहरू धेरै हुने गरेको पाइन्छ । गर्भवती भएको समयमा सबैभन्दा धेरै देखा पर्ने समस्या भनेको प्रेसर हाइ हुने समस्यालाई मानिन्छ । प्रेसर हाइ भएपछि आमा र बच्चा दुवैलाई हानी हुन्छ । साथै प्रेसर हाइ भएपछि इक्लाम्प्सिया हुनेहरू धेरै छन् । कोशी अस्पतालमा मात्र पनि हरेक हप्तामा २ देखि ३ जना इक्लाप्सियाका बिरामीहरू आउने गर्छन् ।
इक्लाप्सिया भनेको चाहिँ प्रेसर हाइ हुँदा वा कुनै बेला नहुँदा पनि बेहोस् हुने, छारे रोग जस्तै जिउ कम्पन हुने, जिब्रो टोक्ने, फिज निकाल्ने साथै बिरामी केही समयको लागि कोमामा पनि जान सक्छ । गर्भवती महिलाहरूमा हुने समस्यामध्ये मधुमेह पनि एक हो । यस्तो अवस्थामा सुगर कन्ट्रोल गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । नर्मल मानिसभन्दा गर्भवती महिलाहरूको सुगरलाई निश्चित कन्ट्रोलभित्र राखिएन भने त्यसले बच्चाको तौल थोरै वा धेरै हुने, पानीको मात्रा धेरै हुने, महिना नपुगी व्यथा लाग्ने जस्ता जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ । यसले आमा र बच्चा दुवैलाई हानी गर्न सक्ने हुँदा बिरामीको उपचार भनेकै जतिसक्दो छिटो डेलिभरी गराउने नै हो ।
धेरैजसो कस्ता बिरामीहरू प्रसूति गराउन आउने गर्छन् ?
गर्भवती परीक्षणमा धेरै फोकस गरिएको कोशी अस्पतालमा प्रारम्भिक उमेरमा विवाह भएर बच्चा पाउने चलन भएकाले पनि होला १५, १६ वर्ष उमेरकाले समेत प्रसूति गराउन आइरहेका हुन्छन् । यहाँ नेपालको मात्र नभएर विराटनगरको नजिक भारतको बोर्डर छेउबाट पनि धेरै बिरामीहरू आउने गर्छन् । कोशी अस्पतालमा निःशुल्क प्रसूति सेवा, अपरेसन पनि निःशुल्क, निःशुल्क एक्टोपिक गर्भावस्थामा गरिने अप्रेसन (बच्चा नलीमा बसेर फुट्ने समस्या) भएका कारण यस्ता सेवा लिनका लागि प्रायः विराटनगर र अन्य ठाउँहरूसँगै बोर्डर पारिका महिलाहरू पनि यहाँ आउने गर्छन् ।
पछिल्लो समय बिरामी कस्तो प्रकारको डेलिभरी गर्न चाहन्छन् ?
नर्मलभन्दा पनि अप्रेसन गरेरै डेलिभरी गराउने धेरै छन् । धेरैजसोले प्राइभेट अस्पतालमा गएर अपरेसन गराउन तयार रहेका हुन्छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै प्रसूति अपरेसन (सिजर एण्ड डेलिभरी) मार्फत गराउने चलन बढ्दै आएको हो । अन्य समस्याहरूबाहेक आमा आफैंले व्यथा सहन नसक्ने हुँदा अपरेसन गर्नु फेसन नै बनिसकेको छ । प्राकृतिक अवस्थाबाट नै बच्चा जन्माउनु आमा तथा शिशुका लागि उत्तम हुने भए पनि प्रसव पीडाबाट मुक्ति पाउन अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउन चाहनेको संख्या बढ्दो छ ।
अप्रेसन गरी बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा हानी पुग्ने गर्छ । प्रायजसोः प्राइभेट अस्पतालमा अपरेसन गराउनेहरूको संख्या धेरै छ । पहिलो पल्टमा अपरेसन गरेकाहरूलाई दोस्रोपल्ट नर्मल डेलिभरी गराउनका लागि निकै गाह्रो हुने गर्छ । कतिपय महिलाहरू चाही नर्मल डेलिभरीको लागि मानसिक रूपले नै तयार भएर आएका हुन्छन् । बच्चामा गडबडी आएर अपरेसन गर्ने अवस्थामा आउँदासमेत उनीहरू नर्मल गरिदिन आग्रह गर्ने खालका पनि छन् ।
कुनै अवस्थामा गर्नैपर्ने अपरेसनबाहेक आग्रह गरेकाहरूको चाहिँ कोशीमा अपरेसन गराउने भने गरिएको छैन । अहिले धेरैजसो प्राइभेट अस्पतालमा पेनलेस डेलिभरीको सुविधा आइसकेको छ । पेनलेस डेलिभरीको सुविधा नहुँदा, दक्ष विशेषज्ञका साथै राम्रो साधन (मोनिटर) र अनुगमन राम्रोसँग नहुँदा कलेजोमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसमा ढाडबाट सुई लगाएर लठ्याएर डेलिभरी गर्नु पर्ने हुँदा विभिन विभागबाट दक्ष जनशक्तिहरू चाहिन्छ ।
पहिलो पटकको बच्चा पाउने डर भएका अभिभावकलाई कसरी सल्लाह सुझाव दिनु हुन्छ ?
आजकल अब पहिले जस्तो छैन । धेरै बच्चा पाउने चलन नहुने भएपछि पहिलो बच्चामा नै अभिवावकहरू तयार भएर बसिरहेका हुन्छन् । विभिन्न फोटोसुट तथा बेबी सावर गरेर आफ्नो बच्चा आउने खुशी सबैसँग बाँडिरहेका हुन्छन् । तर, गर्भावस्था भनेको जहिले पनि अप्रत्याशित हुन्छ, कहिले के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । अधिकांश आमाहरूले दुखाइ सहन नसक्दा अपरेसन गरेर छिट्टै बच्चा निकालदिन वा महिना नै नपुगिकन पनि अप्रेसन गरेर डेलिभरी गरिदिन आग्रह गर्छन् । यस्तो गर्नु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि जबर्जस्ती गर्नेहरू पनि थुप्रै आउँछन् ।
सल्लाह सुझावभन्दा पनि अत्यधिक दुखाइ हुने हुँदा दुखाइ सहनका लागि मानिसक रूपले तयार हुनुपर्छ । प्रेसर हाइ, असामान्य तौल वृद्धि, पानी बग्ने, रक्तश्राव हुने जस्ता विविन्न लक्षणहरू देखा पर्दा जाँच गर्न आउनुस्, बच्चा चलेको छ वा छैन भनेर ख्याल गर्नुपर्ने र पहिलो बच्चापछि दोस्रो बच्चाको लागि ४ देखि ५ वर्षको समय राख्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने गर्छौं ।
अभिभावकलाई सुझाव दिन कतिको गाह्रो हुन्छ ?
काउनसेलिङ्ग गर्दा सबैभन्दा गाह्रो पाटो भनेको लेबरपेन भइसकेपछि हो । व्यथा लागेको बेलामा अत्याधिक दुखेको हुन्छ, त्योबेला केही सुझाव नै दिन सकिँदैन । यस्तो समय नम्र भएर काम गर्नुपर्ने हुँदाहुदै पनि कराउन पनि पुग्छौं तर, त्यो गर्न नहुने कुरा हो । कतिपयले भनेको नमान्ने, जाँच नै गर्न नदिने, अपरेसन गराउनका लागि बारम्बार आग्रह गर्ने, चिनेजानेको मान्छेहरूबाट दवाव दिन लगाउने, बिरामीलाई केही भयो भने जिम्मा लिनु हुन्छ भन्दै धम्कीसमेत दिने गर्छन् । काउनसेलिङ्गको पार्ट एकदम जटिल छ ।
अभिभावकहरूलाई सुझाव दिँदा पनि कतिपयले डेढदेखि २ वर्ष, ३ वर्ष नपुग्दै अर्को बच्चा लिएर आएका हुन्छन् । यी कुराहरू परामर्शको कमीले वा बिरामीले नबुझेर वा बुझेर पनि नचाहेर हुने हो । समय नराखी बच्चा जन्माउँदा यसले डेलिभरीपछि रक्तश्राव हुने समस्या, पाठेघर फुट्ने समस्या, पाठेघर फुट्दा बच्चा पनि तुरुन्त मर्ने, आमालाई पनि बचाउन गाह्रो हुने, बच्चा जन्मिए पनि शारीरिक तथा मानसिक विकास नहुने हुन सक्छ ।
गर्भावस्थामा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु कतिको हानिकारक ?
गर्भावस्थामा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने नहुने भने छैन । गर्भावस्थामा शारीरिक सम्बन्ध राख्न सकिए पनि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपयमा भने शारीरिक सम्बन्ध राखेका कारण महिलाहरूलाई छिटो व्यथा लाग्ने, पाठेघरको मुखतिर साल भएमा अत्यधिक रक्तश्राव हुने हुँदा शारीरिक सम्बन्ध राख्दै नराख्ने भन्दा पनि राख्दा सावधानी अपनाउन हामी सुझाव दिन्छौं ।